Snapchat inovandudzwa neshanduko dzakakosha | IPhone nhau
Snapchat iko iko kunyorera kuri kutora kutariswa kwepasirese zvakanyanya kupfuura nakare kose munguva dzichangopfuura. Simba rayo uye spontaneity zvakakwanisa kukwezva vashoma uye vashandisi mazuva ese, izvo zviri kushandura chikuva kuita chishandiso chakasimba chekutaurirana kwete chevanhu chete, asiwo chezvemadhijitari midhiya. Ndokusaka ikozvino ivo vatipa isu neyakagadziriswazve Dhizaina Discover.
Uye icho chinhu chatinozoona pakutanga kuona, nekuti shanduko yacho inoshamisa. Iko kumberi kwaive nemalogo ezvinyorwa zvakasiyana zvine zita ravo uye ruvara rwekambani, parizvino tinopihwa pfupiso yechimwe chikamu chemukati chatinogona kuwana mukati, zvichiita kuti zvive zvinoshamisira uye zvehunyanzvi, zvichitikoka kuti tizvinyurise mune nyaya dzavanotipa. Shanduko iyi inoshanda zvese kuchikamu chepamusoro chetabhu kwatinowana iyo nyaya, pamwe nekuDiscovery tab mune yakazara.
Kunze kwekunaka, Isu takawanawo zvimwe zvitsva mumipositi nzira, senge sarudzo yekugona kunyorera kune imwe (nekubatisisa pairi), kuitira kuti kubva ipapo nhau dzayo dzionekwe munzvimbo imwecheteyo patinoona nyaya dzevamwe vashandisi dzatinotevera. Pamusoro pezvo, kutyaira kwaSnapchat kunatsiridza nyaya dzayo "mhenyu" iripowo mune ino gadziriso, ichivapa mukurumbira uye kuratidzika kwemashure.
Aya maficha nyowani anotenderedzwa nekugadziriswazve zvishoma kune zvimwe zvikamu zveyakajairika interface, izvo zvinopa iyo yakavandudzwa mweya kuitira kuti mweya wedu wekuburitsa zvinyorwa zvitsva mazuva ese usarase. Saka, Kana usati waedza Snapchat parizvino, ino inguva yakanaka yekupa pasocial network yenguva yacho kuyedza. Kana iwe watove vashandisi, ndokuona iwe ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tiri kufarira iyo nyowani Snapchat yekuvandudza, yakawanda